Fiidiyowyada tababarka kala duwan ee uu bixiyo Mr. Rossetti Stéphane waa kuwo tayo wanaagsan leh. Dhowr kiis oo wax ku ool ah ayaa si faahfaahsan loo soo bandhigay. Adoo raacaya isaga YouTube-ka waxaad hubtaa inaad waxbadan baran doonto oo aad dhaqso u horumarin doonto xirfadahaaga.
Soo saarida kuubanka kaqeybgalka oo leh aagag jarid ayaa si fudud loogu sameeyaa tollooyinka soo socda ee tabka istaaga iyo shanlooyinka. Waxaan ku dhiseynaa meelaha wax lagu qoro xariiqyo hage ah si qaataha uu si fudud ugu qoro macluumaadka la codsaday, sida magaca iyo cinwaanka. Waxaan ku ciyaarnaa jagooyinka tabku istaago iyo meelaha u dhexeeya baaragaraafyada si loo fududeeyo soo-bandhigga iyo isu-dheellitirka qaabka. Waxaan sameyneynaa aagagga loo yaqaan 'cryptogram' iyadoo la adeegsanayo shanlooyinka 'Word combs' si aan ugu fududeyno gelitaanka lambarka boostada iyo lambarka taleefannada lambarrada sanduuqyada. Waxaan bixinaa sanduuqyo cadcad oo leh astaamo iyo jilayaal gaar ah si loo fududeeyo jawaabaha ...
Abuur kuubbo jawaab ah ereyga Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Kulliyada, aniga ma aniga?
horeVAE Transition pro iyo maalgelinta OPCO: kordhinta illaa 2021
socdaMashruuca kala-guurka xirfadeed - Isbadalka Xirfadeed ee CPF